4 Izinketho zokuFaka iBhethri ye-iPad efile
I-iPad Iziqondiso namaTutorials
Ibhethri ye-iPad ngokusobala isici sayo esibaluleke kakhulu. Ngemuva kwakho konke, uma i- iPad yakho ingenamandla , ngeke isebenze. Ibhethri ye-iPad ngokuvamile ihlala isikhathi eside, kodwa uma ibhethri yakho iqala ukuhluleka, unenkinga. Awukwazi ukubeka kalula ibhethri ehlulekayo entsha ngoba i-Apple yakha imikhiqizo yayo ngamacala aqinile.
Kodwa lokho akusho ukuthi akukho lutho ongakwenza. Nazi izinketho ezine zokwenza uma ibhethri ye-iPad ingasabeki icala futhi isidinga ukushintshwa kwebhethri .
Ukushintshwa kwebhethri ye-iPads ngaphansi kweWaranti / AppleCare
Uma i-iPad yakho isengaphansi kwewaranti yayo yasekuqaleni, noma uthenge iwaranti enwetshiwe ye-AppleCare futhi isasebenza, uzojabula kakhulu. I-Apple izothatha indawo yebhethri (yonke i-iPad!) Mahhala.
Funda lesi sihloko ukuze ufunde ukuthi ungabheka kanjani uma i-iPad yakho isengaphansi kwewaranti (lesi sihloko sibheka i-iPhone, kodwa konke okusebenzayo kusebenza ne-iPad, futhi).
Uma kunjalo, vele uye kulewebhusayithi ye-Apple bese uchofoza inkinobho Qala inkinobho yesicelo . Ungase futhi usethe i-aphoyintimenti ku-Apple Store bese uthatha i-iPad yakho ngokuqondile. Khumbula ukulondoloza idatha yakho ngaphambi kokunikeza i-iPad yakho-ngaphandle kwalokho, ungase ulahlekelwe yonke idatha yakho. I-iPad yakho elungisiwe noma efakwe esikhundleni kufanele ifike ezinsukwini ezingu-3-5 zebhizinisi ngemuva kokunikeza i-Apple yakho.
Kukhona ukuphrinta okuhle, yiqiniso: i-Apple ingase ihlole i-iPad yakho ukubona ukuthi inkinga ibangelwa yini engavunyelwe iwaranti. Futhi, uma i-iPad yakho ibhala phezu kwayo, isikhathi sokuguqula singase sibe amasonto angu-2, ngoba kuzodingeka bafake i-iPad esikhundleni sakho (uma uthola eyodwa).
Ukushintshwa kwebhethri ye-iPad Ngaphandle kwewaranti
Uma i-iPad yakho ingaphandle kwewaranti, izindaba zisehle kakhulu, nakuba zibiza kakhulu. Uma kunjalo, i-Apple izolungisa ibhethri yakho noma ibuyisele i-iPad engu-US $ 99 (kanye no-$ 6.95 wokuthumela, kanye nentela). Inqubo yokuqala lokhu kulungiswa ifana ne-iPads ngaphansi kwewaranti: shayela i-Apple noma iya ku-Apple Store.
Leyo intengo enhle yokwenza i-iPad yakho isebenze futhi, kodwa kufanele ucabangele leyo ndleko ngokubiza izindleko zokuthola i-iPad entsha ngokuphelele. Uma i-iPad ibhethri lakhe lihlulekile lidala kakhulu, kungcono ukuthi usebenzise le $ 107 ngokuqondene nezindleko zokuthenga i-iPad entsha kunokulungisa umdala.
Izitolo zokulungisa ezigunyaziwe
Kunezitolo eziningi ezilungisa izikrini ze-iPad namabhethri. Ziningi kakhulu ungathola nazo ezikhungweni ezitolo eziningi. Bangase bakhokhele kancane ukulungiswa kunase-Apple, kodwa qaphela. Uma ufuna ukusebenzisa enye yalezi zindawo, bheka enye i-Apple egunyazwe ukuhlinzeka ukulungiswa. Lokhu kusho ukuthi baqeqeshwe futhi banolwazi. Uma kungenjalo, ungazama ukulondoloza imali ekulungiseni kodwa ugcine nomuntu olungiswayo ongenalwazi obangela izinkinga eziningi. Futhi uma uthola ukulungiswa kusuka kumthombo ongagunyaziwe odala inkinga, i-Apple ngeke ikusize ukuyilungisa.
Ukushintshwa kwebhethri ye-iPad ye-DIY
Ngincoma ngokuqinile ngalolu khetho ngaphandle uma usebenza kahle futhi ungakhathazeki uma ubhubhisa ngokuphelele i-iPad yakho. Lokho kusho, ngamathuluzi afanele namakhono, kungenzeka ukuthi ufake indawo yebhethri ye-iPad ngokwakho.
Ngokuba cishe ama-dollar 50-90, ungathenga wonke amathuluzi nezinxenye ezidingekayo ukuze ufake i-battery yakho ye-iPad ngokwakho. Angiqiniseki ukuthi kufanelekile ingozi, ngicabanga ukuthi ukushintshwa kuka-Apple kuphela kubiza u-$ 99, kodwa lokho kuphezu kwakho. Vele uhlale ukhumbule ukuthi ukuzama ukulungisa i-iPad yakho kuphuma iwaranti (uma kusengaphansi kwewaranti). Uma uchitha i-iPad yakho, i-Apple ngeke ikusize. Ngempela uwedwa.
Uma usufuna ukufaka esikhundleni sebhethri yakho ye-iPad, hlola lesi sifundo kusuka ku-iFixit.
Indlela Yokuphatha Izaziso Zokusebenzisa I-iPad
Indlela Yokubamba I-iPad Ngokufanele
Ungavimba kanjani izikhangiso ku-iPad yakho
Yini Okufanele Uyenze Ngesikrini se-iPad esinqunyiwe?
Indlela Yokuxhuma i-iPad ku-Wi-Fi ku-5 Izinyathelo Ezilula
Indlela Yokunikeza I-iPad App
Indlela Yokwabelana Ngezithombe, Amawebhusayithi, namafayela ku-iPad
Indlela Yokuhlela Ukuphila Kwakho Nge-iPad Yakho
Indlela Yokubhangqa, Ukuxhuma noma Ukukhohlwa Idivayisi ye-Bluetooth ku-iPad
Indlela Yokuthumela Umlayezo Ngombhalo Ongenhla kusuka ku-Gmail
Micrsoft Umshicileli 2010 - Ukuqala kokuqala
I-Epson's Perfection V330 Photo Scanner
Indlela Yokufaka Izinjini Zokusesha ku-Inthanethi Explorer 8
Ingabe amathebulethi anelungelo elanele lokusebenzisa emabhizinisini?
Disk First Aid: Usizo Lokulungisa I-Mac OS Disk
Thola ama-Magnifiers amavidiyo weDeskithophu
Funda i-Linux Command - fdisk
Thuthukisa i-RAM yakho ye-Mac Wena ngokwakho: Okudingeka Ukwazi
I-Grand Theft Auto IV Patch Version 1.0.5.0
I-Grand Theft Auto IV - Ukubuyekezwa kwe-GTA IV (PS3)
I-Macrorit Expert Partition v4.9.3
Iyini ifayela le-AST?
I-Pioneer Elite X-Z9 System Compact Stereo
Hlela Okuphambene Nokuphulwa Kwe-copyright
Setha i-Wi-Fi ku-Nintendo 3DS Yakho Nalesi Guide Esilula
I-Calendar Design Software ye-Macintosh
Indlela Yokwenza Ividiyo Yesiklasi
Indlela Yokushintsha Indlela Imilayezo Engafundiwe Ikhonjisiwe ku-Outlook